SAMOTALIS: DHAMBAAL TACSI AH UU DIRAAYO MUSTASHAR AXMED CARWO , GEERIDA MARXUUM XUSEEN CALI XIRSI
DHAMBAAL TACSI AH UU DIRAAYO MUSTASHAR AXMED CARWO , GEERIDA MARXUUM XUSEEN CALI XIRSI
INAA LILLAH WA INNAA ILLEYHI RAAJACUUN. Waxaan tacsi u dirayaa xaasaskii, tafiirtii, ehelkii, qarabadii, xigtadii, xigaalkii, iyo guud ahaan qaranka Soomaliland xukuumad iyo shacbiba geerida Maxuum Mujaahid Xuseen Cali Xirsi Carwo
Marxuum Muj. Xuseeni, waxuu ahaa nin naftiisa u huray qaranka, isaga oo ilaa xiligii gumeysiga ahaa shaqaale dawladeed, isla markaasna qayb libaax ka qaatay halgankii SNM isaga oo dhammaan guddoomayaashii SNM la shaqeeyey oo u ahaa Chief of Staff, isla markaasna la soo shaqeeyey seddexda Madaxweyne ee Cabdirahmaan, Cigaal iyo Riyaale, kaalin talo bixin ahna la lahaa Madaxweyne Siilaanyo kolkan oo uu da' ahaa. Nin firfircoon oo ka dhaqdhaqaaq badan dadiisa, waayo arag aan afkiisa xumaan iyo xajiimeyn ka caaganaa, siyaasi danta guud ku hawlanaa oon marna ku danaysan. Waxuu ahaa aasasayaashii xisbigii UDUB
Oday dhaqan iyo siyaasadda casriga ah isku si u yaqaanay, dhalin iyo waayeel yaqaanay sida uu ula hadlo. Nin aan wax badan ka kasbaday taariikh iyo aqoon dad iyo dalba ah.